Ny lakilen'ny 7 amin'ny varotra sy ny varotra madinidinika | Martech Zone
Alarobia, Septambra 17, 2014 Talata, Septambra 16, 2014 Douglas Karr
Na dia manampy ny orinasa lehibe amin'ny varotra sy ny ezaka marketing aza izahay, dia orinasa kely izahay. Midika izany fa manana loharanom-bola voafetra izahay ary rehefa lasa ny mpanjifa dia ilaina ny fananana mpanjifa hafa hisolo ny toerany. Izany dia ahafahantsika mifehy ny volantsika ary mitazona ny jiro hatrany! Sarotra izany toe-javatra izany. Matetika isika dia manana iray na roa volana hiomanana amin'ny fiaingan'ny mpanjifa iray sy ny sambo manaraka. Ny orinasa lehibe dia manana ny renivohitra hitombo ary aorina ho azy, ny orinasa kely tsy.
Noho izany, misy ny laharam-pahamehana izay ilain'ny orinasa kely rehetra hahazoana antoka fa mihetsika hatrany ary mivadika ho mpanjifa! Infusionsoft dia nametraka an'ity infographic henjana ity Ilay Big 7: Izay mila fantatry ny orinasa kely rehetra momba ny varotra sy ny varotra. Ny lakilen'ny 7 amin'ny varotra sy marketing kely dia:
Manintona ny fifamoivoizana an-tserasera fampiasana ny fikarohana sy ny media sosialy.
Fisamborana amin'ny varotra fampahalalana momba ny fifandraisana amin'ny tolotra.
Nurture Prospects amin'ny alàlan'ny fifandraisana manokana sy ara-potoana.
Manova Sales amin'ny alàlan'ny fanovana ny navigateur ho lasa mpividy amin'ny alàlan'ny fizotran'ny varotra voatsinjara.
Manafaka & afa-po hamadika ny mpanjifa vaovao ho mpanjifa tsy mivadika.
Mpanjifa Upsell amin'ny alàlan'ny fandefasana tolotra fanaraha-maso amin'ny vokatra sy serivisy fanampiny.
Makà Referrals amin'ny fangatahana ny mpanjifa mahatoky hampiely ny momba anao sy manome valisoa azy ireo.
Tags: mivadika varotraCustomer satisfactionmanatitra vokatrafitarihana firakafikolokoloana fanantenanaanaranavalisoavarotra sy marketingfandraharahana madinikasmbfifamoivoizanampanjifa upsell